सत्ताधारीहरुको दोहोलो काढिने
यति चाँडै गणतान्त्रिक नेताका कारण गणतन्त्र समेत गनायो । यसकारण राजतन्त्र जिन्दावाद भनिरहेका छन् आम नागििरक । व्यवस्था खर्चिलो, अनुशासनहीनता र भ्रष्टाचारका कारण धान्न नसकिने स्थितिमा पुग्यो । हिजो जे जे मीठा आश्वासन दिएका थिए, आशा र भरोसा देखाएका थिए, ती केही पनि पूरा हुन सकेनन् । उल्टो नेताहरु अपराधमा लिप्त हुनथाले । जनप्रतिनिधि, देश र जनताप्रति जवाफदेहीता लिनुपर्ने नेताहरु आफ्नो खान्की कसरी बढाउने, कसरी सुरक्षित पार्ने भन्नेमा केन्द्रित भइरहेका छन् । आफू अलोकप्रिय भएको थाहापाएर नेताहरु ढाकछोपका लागि पूर्वराजा र राजावादी व्यवस्था परिवर्तनको षडयन्त्रमा लागेको बताइरहेका छन् । पूर्वराजा र राजावादीका सामान्य गतिविधिबाट समेत नेताहरु तर्सिन थालेको देखिदैछ ।
भारतका विदेशमन्त्री आउनुपूर्व नै प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय वैठक बोलाएर प्राप्त उपलव्धि खतरामा पर्नथालेको राँडो रुवाइ गरेको पनि देखियो । किन बिर्सेको होला, ०४६ अथवा ०६३ सालको परिवर्तन भारतको सौजन्यबाट प्राप्त भएको हो । अहिले आएर यी वामपन्थी भन्नेहरु झस्केका छन्, भारत गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयताको विरुद्धमा पो लाग्न थाल्यो । भारतलाई नेपाली नेताहरु एक छन् भनेर जतिसुकै देखाउन खोजे पनि भारतले बुझेको छ, नेपाली नेता पैसाका भोका छन् । यस्ता नेतालाई नेपाली जनताले पनि बुझिसकेका छन्, लखेट्नै परे जनताले नै लखेट्नेछन् । लखेटिने जनविरोधी नै हुन् ।
प्रचण्ड वानेश्वरमा झण्डै जनताको भेलमा फसेका, प्रहरीले घेरा हालेर बचायो । त्यसअघि चितवनमा प्रचण्ड र रेणु दाहालको विरुद्धमा नाराबाजी मात्रै होइन कि पुतलासमेत दहन गरियो । जनतालाई सधैं झुक्याउन सकिदैन, जनताले सधैं यस्ता नेतालाई काँध थापिरहदैन भन्ने सन्देश पनि हो यो । यी भ्रष्ट र प्रजातन्त्र विरोधी एवम् अपराधमा जेलिएकाहरुलाई नेपालीले सधैं माफी नदिने संकेत पनि हो । नेताहरुले राम्ररी बुझेका छन्, यहीकारण प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक बोलाएर गणतन्त्र रक्षा गर्न सबै एकैठाउँमा उभिन आह्वान गरेका हुन् ।
जनताले राजा जिन्दावाद भनेर नारा लगाए भन्दैमा आत्तिने गणतन्त्रवादीले टेकेको भुइँ धस्सिसकेछ । मक्किसकेछ यिनको आधार । भारत रिसाएको र नागरिक बिरोधमा लागेको देखेर नेताहरुको सातो गएको छ । राजतन्त्रलाई निलम्बन र एकपक्षीय रुपमा गणतन्त्र कार्यान्वयन गरेको मात्र होइन, जनताको सुझाव मिल्काएर धर्मनिरपेक्ष संविधान घोषणाप्रति पनि जनआक्रोस बढेर गएको छ । राजतन्त्रको उन्मूलन नै सबै समस्याको समाधान हो, निरंकूताको अन्त्य हो भन्नेहरु आफै महाराजा बनेका छन्, महासामन्त भइसकेको स्थितिमा जनताबाट डराउनु स्वभाविक पनि हो । जनताले बुझिसके, खतरा जनमतका नाममा सिंहदरवार छिर्नेहरुसँग छ । आक्रोसित जनतालाई कसरी थेग्लान् ?
हिजो र आज पनि गोयवल्स शैलीमा नेताहरुले गरेको प्रचारवाजी झूठ प्रमाणित भइसकेको छ ।
प्रम ओली राजतन्त्र स्थापित भइहाले पनि भारतका कारणले हो, भारतले ल्याइदिएको दोषारोपण गर्नका लागि उनले सर्वदलीय बैठक बोलाएका हुन् भनेर विश्लेषकहरु भन्छन् ।
राजतन्त्र र सत्ताधारीको विश्लेषण गर्नेहरु कति त भारतका तरफदारीसमेत गरिरहेका छन् । अव संघीयता चलाउन मुस्किल भयो, राजतन्त्र आउने भयो भनेर सत्ताधारीहरुसमेत कोकोहोलो मच्चाउँदै पूर्वराजालाई कसरी ठेगान लगाउन सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा प्रचण्डको मुखबाट नागार्जुनबाट समेत लघारिन्छ भन्नुले पनि यिनीहरुको भयको मात्रा स्पष्ट रुपमा देख्न सकिन्छ ।
नेपालमा संविधान जनताले नकारिसकेका छन् । संघीयताबाट वाक्क भएर कर नतिर्ने मूडमा जनता पुगिसकेका छन् भने जता पनि घूस दिनुपर्ने र भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका घटनाबाट आमनागरिक वाकविधि भइसकेका छन् ।
लोकतन्त्र राम्रो व्यवस्था हो, लोकतान्त्रिक राजतन्त्र नेपालको आवश्यकता हो । जनताले चाहे जसेसुकै परिवर्तन पनि सम्भव छ, जनताले परिवर्तन खोजिसके । सवाल यत्ति हो कि सत्ताधारीहरुको भ्रम र गलत प्रवृत्तिसँग जनता कहिलेसम्म सावधान नहुने ? जनाक्रोश कहिले सडकमा पोखिने र सत्ताधारीहरुको दोहोलो काढ्ने भन्नेमात्र बाँकी छ ।